12/01/2018 - Page 2 sur 4 -
Vaky ny ady eo amin’ireo mpivarotra etsy amin’ny Pavillons Analakely sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Nanambara mantsy ny fikambanan’ireo mpivarotra amin’ny Pavillon Analakely fa nomen’ny CUA alalana mivarotra eo amoron-dalana manakona ny tsenan’izy ireo …Tohiny
Fihotsahana trano sy tany : Olona roa namoy ny ainy
Olona roa no namoy ny ainy vokatry ny fihotsahana tany sy firodanan’ny trano niseho teto Antananarivo tamin’ity herinandro ity. Teny Itaosy ny tranga voalohany izay namoizana zaza nilalao, ary tsy nanam-po na inona na inona. …Tohiny
Brickaville : Zaza efatra matin’ny tazomoka
Mbola mandripaka hatrany ny aretina tazomoka eto Madagasikara. Ho an’ny distrikan’i Brickaville, niakatra ny tahan’ny aretina, taorian’ny fandalovan’ny rivodoza AVA. Araka ny tatitra ny Médecin Inspecteur, Randriatahina Jean Rosa Liva avy any an-toerana, miisa 4 …Tohiny
Oniversite tsy miankina : Voahilikilika ny mpitsabo mpanampy nahavita fianarana
Na dia eo aza ny fankatoavana avy amin’ny fanjakana ny amin’ny tokony handraisana ny mpianatra rehetra mivoaka avy amin’ny sekoly nahavita ny fianarana dia misedra olana tanteraka indray ny mpianatra nivoaka avy amin’ireny sekoly tsy …Tohiny